MaTips for Men ekuti ugutse Mukadzi paBonde asasvirisa elsewhere - Vanoda Zvinhu
1) Usatya kukumbira mwanasikana kuti ambotanga aidya. Ngaarege kuita zvehasha nekuti angakukuvadza. Zvinyoronyoro ika nhai vasikana.
2.)Paanenge achikukwekweta kudaro haikona kufunga zvirikuitika ipapo, itofunga hako zvimwewo zvinhu eg. mhamba, bhora, kana kuti
mota tsva yaungada kuchaira.
3)Kana achinge apedza kusvisvina haikona kubva wangoiti makare dhovho, kana ari mudiwa wako ibva waenda panext step, asi kana ari
musikana wemagame (small house – foreign based) ibva wapfeka majombo
5 kana 6 (Remember you are still not guaranteed of safety, unogona kungobata mukondazi anyhow)
4)Kana ari mudiwa wako (which I personally Prefer) Provided achangobva mushower! Chitora chocolate spread woizora kumanyepeso kwake usatya kunanzva, ita uchitenderedza rurimi pa***** chaipo,mbichana mbichana ramba uchiwedzera speed.
5)Durura imwezve chocolate padumbu nepamazamhu wotanga kumutsvoda uchikwidza, chitanga kunanzva nyatso dzake zvinyoronyoro usaruma nekuti dziri very sensitive, by the time you have done all this mese munenge manzwa nekuda, ipapo inenge yachiti twi semutswi tsinga dzangoti tara tara. Iye mwanasikana anenge aneta sehuku yabva kutandaniswa, zasi uku kwazvimba fanika stupid!
6) Chiisa nzvonyo chete wotanga kuitenderedza nechekumusoro ikoko, haikona kunyudza yese straight, ramba uchiitenderedza
kusvikira aakukudhonza, sundira kusvika pahalf wotanga kurova chopaz, ipapa anengeoshinyirika, chana chotanga kutapirirwa manhanga kutapira, chitangakuibuditsa kunze uchiitenderedza sezvandamboreva, achakumbundira achikudhonza. Iwe ndipo paunozoiti yese nde!!!
Wopomba zvehasha chaizvo, usaconcentrata pfungwa dzako ipapo straight nekuti unokasire kutsatsira, usamutarisa nekuti nezvaanenge oita panguva iyi ukangomutarisa chete urikubva wapfapfaidza one time. Tsinzina maziso ako urambe uchikwatura nyini. Uchaona mwanasikana otanga kuomesa muviri akakusungirira, acharamba achitensa kusvikira aputika!!
7) Paanenge angopedza iwe ibva wavedzera moto nekuti inenge yasvikawo turn yako, ramba uchirova dakara wonzwa kunge njere nezvose zvemukati mako zvoda kubuda, ibva waregerera zviende, naiyewo anenge achikoma kechi2 in a row! – two time baba.
8) Kana ari mukadzi wako ibva wanomubikira cup ye tea umuunzire mubedroom iwe uchirova hako mudzanga kana usingapute ingotsvaga
chero, to calm yourself down. Ndinofunga mose madzidza zvamanga musingazive, vanababa musasiye vakadzi venyu muchienda kumahure,
svirai vakadzi venyu zvakasimba mukarega ndini ndichavaisa inini! Majaha tsvaganai nemhandara mumwechete panguva imwechete!
CAUTION: HIV/AIDS kills, Ndiri kutaura zvandinoziva,hama dzangu jahwi dzafa nawo newe ndinoziva kuti nedzakoo jahwi hama neshamwari dzafa.
Updated: April 22, 2014 — 12:14 am